ब्वाइफ्रेण्डसँग कोठामा बसेकी प्रियंका रंगे-हात समातिएपछि… – Ramailo Sandesh
प्रियंका एकपटक आफ्ना ती ब्वाइफ्रेण्डसँग कोठामा बसिरहेका बेला रंगे-हात समातिएकी थिइन् । पढाइका लागि अमेरिका गएका बेला प्रियंकाकी आन्टीले उनलाई ब्वाइफ्रेण्डसँग रंगे-हात समातेकी थिइन् ।
दिउँसोको २ बजेको थियो र आन्टी घर फर्किने समय भएको थिएन । बबलाई घरबाहिर पठाउने कुनै बाटो नपाएपछि प्रियंकाले बबलाई कोठाको दराजभित्र बन्द
प्रियंकाका अनुसार त्यस दिन उनी र बब एक अर्काको हात समातेर टिभी हेरिरहेका थिए । त्यही बेला प्रियंकाले आन्टी घरतर्फ आइरहेको झ्यालबाट देखिन् ।उनका अनुसार उनी निकै डराएकी थिइन् । त्यतिबेला दिउँसोको २ बजेको थियो र आन्टी घर फर्किने समय भएको थिएन । बबलाई घरबाहिर पठाउने कुनै बाटो नपाएपछि प्रियंकाले बबलाई कोठाको दराजभित्र बन्द गरिदिइन् ।
प्रियंकाका अनुसार आन्टीले त्यसपछि प्रियंकाकी आमालाई भारत फोन गरेर यसबारे बताएकी थिइन् । त्यसपछि प्रियंका भारत फर्किन्
प्रियंकाले लेखेकी छिन् ‘किरण मासी घरभित्र पस्नुभयो र सबै कोठा चेक गर्न थाल्नुभयो । म बेडमा बसेकी थिएँ र मेरो हातमा बायोलोजीको किताब थियो । मैले आफूलाई पढिरहेको जस्तो देखाइरहेकी थिएँ । मासी मेरो कोठाको ढोकामा आउनुभयो र भन्नुभयो यसलाई खोल । मैले सोधें के खोल्ने ? आन्टीले भन्नुभयो आफ्नो दराज खोल ।
म डरले काँपिरहेकी थिएँ किनकि यसअघि मैले मासीलाई यति रिसाएको कहिल्यै देखेकी थिइन् । मैले दराज खोल्नासाथ सब गडबड भयो किनकि त्यहाँ बब थियो ।’
तपाइको यो साता कस्तो रहला? यी राशिको राम्रो छैन समय, महत्वपूर्ण काम नगर्नु नै बेस!